Asked by Spellian 6 iminyaka edlule
There is a program that has attached itself to my Firefox browser. Every time I open Firefox to search the internet this program is using pop-ups, to the extent that it c… (funda kabanzi)
Asked by Bill851 6 iminyaka edlule
I have tried all of the methods to delete the cookies that are suggested on your support site. I have tried them if the selection in Options is for cookies allowed and wi… (funda kabanzi)
Asked by zinester1313 6 iminyaka edlule
Asked by DEBRALYND 6 iminyaka edlule
At times I want to delete cookies that accumulate from a specific website so I use the search bar. If the "remove all cookies" is clicked after using the search bar, wil… (funda kabanzi)
Asked by firefoxgreg66 6 iminyaka edlule
Asked by scientist263 6 iminyaka edlule
Asked by pjseale 6 iminyaka edlule
I had a secure browsing tab on my screen for several days and now it is gone. I'm sure I've done something because my toolbars are now at the top of the screen instead o… (funda kabanzi)
Asked by caroledouglas 6 iminyaka edlule
I can do everythinga usaual with Firefox until I try and access my emails through gmail. Throws up a cookies message but unabke to check and none of th advice seems to w… (funda kabanzi)
Asked by Axarquia 6 iminyaka edlule